AT&T dia manokatra famandrihana ho an'ny Samsung Gear S3 anio | Vaovao momba ny gadget
AT&T dia manokatra pre-order Samsung Gear S3 anio
Ny mpandraharaha dia mialoha ny ambiny miaraka amin'ny fanombohana famandrihana na fividianana mialoha ny famantaranandro marani-tsaina an'ny orinasa Koreana Tatsimo, androany mamela ny mpampiasa any Etazonia hanome fahafaham-po ny faniriana hanana izany ary hiantoka vola vitsivitsy. Raha ny marina, roa andro sisa tavela amin'ny fanombohana ofisialy ity akanjo ity ary amin'izao fotoana izao ny fandraisana ny mpampiasa dia mandrisika ho an'ny tsena iray izay mijaly amin'ny resaka varotra tato anatin'ny volana vitsivitsy, ho hitantsika raha mihatsara izy ireo izao rehefa Krismasy ho avy ny fampielezan-kevitra.
Na ahoana na ahoana, ny zavatra hainay mazava dia ny maodely azon'ny mpampiasa AT&T hotehirizina io no Samsung Gear S3 Frontier, izay misy fifandraisana 4G LTE. Ny vidin'ny famantaranandro dia 249,99 euro fa raha mitazona finday avo lenta Samsung ny mpanjifa dia avela $ 50 fotsiny ny famantaranandro. Mazava ho azy fa misy fifanarahana roa taona.
Ity famantaranandro ity dia mahatohitra ny rano, ny vovoka, ny fikoropahana ary ny gorodona, manana GPS ihany koa izy, mikrô sy mikrô handraisana ny feon'ireo antso. Natolotra tamin'ny fomba ofisialy tao amin'ny IFA 2016 any Berlin ary any Espana dia antenaina fa ny vidin'ity famantaranandro marani-tsaina ity mijanona amin'ny 399 euro. Amin'ny maha-te hahafanta-javatra azy, zava-dehibe ny manamarika fa hifanaraka amin'ny iPhone an'ny Apple izy io, saingy mazava ho azy fa hanana safidy kely kokoa noho ny an'ny mpampiasa Samsung izy io. Amin'ity tranga ity dia azontsika atao ny milaza fa ny fanatsarana raha ampitahaina amin'ny kinova teo aloha dia betsaka ary tianay ny famolavolana amin'ny ankapobeny, mila ampidinintsika kely ny vidiny mba hahafahana misafidy ireo mpampiasa sasany izay Tsy dia tena ilaina amin'ny fiasan'ireto famantaranandro ireto.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » Gadgets » SmartWatch » AT&T dia manokatra pre-order Samsung Gear S3 anio
Ireo no lalao amin'ny volana ho an'ny PlayStation Plus sy Xbox Gold amin'ny Novambra